Iindaba - HDMI Imveliso 4K Zoom Block Camera Module
I-View Sheen iphuhlileIkhamera yebhlokhi yokusondeza ngokukodwa kwi-UAV okanye idrone.
Yintoni umahluko phakathiimodyuli yekhamera yokusondeza idronekwaye iikhamera yebhlokhi yokusondezayeCCTV?
1. Ukuze kuncitshiswe ukulibaziseka kwevidiyo,Imodyuli yekhamera ye-1080p ye-UAV blockixhotyiswe njengesiqhelo 1080P@50fps/60fps ireyithi yefreyimu ephezulu.Oku kukhetho lwekhamera yeCCTV.
2. Ukuze ihambelane nokuhanjiswa komfanekiso we-HDMI, ikhamera ye-block ye-UAV isekela ukukhutshwa kwenethiwekhi kunye nevidiyo ye-HDMI.Ikhamera yeCCTV idla ngokuba yimveliso yenethiwekhi okanye imveliso yeLVDS.
3. Amakhonkco olawulo ahlukile.Kwi-UAV, umyalelo wokulawula udla ngokuthunyelwa ukusuka kumhlaba ukuya kwiphaneli yokulawula yegimbal.I-gimbal ilawula ikhamera nge-port ye-serial.Ke ngoko, ikhamera ye-UAV isebenzisa kuphela uthotho lwezibuko isebenzisa iprotocol ye-VISCA.Eli zibuko le-serial lixhasa ukubamba, ividiyo kunye neminye imiyalelo ephuhliswe ngokukodwa kwi-UAV.
Ekusetyenzisweni kwekhamera yeCCTV, umyalelo wolawulo uhlala uthunyelwa kwikhamera yebhloko ngomyalelo womnatha.Ikhamera isebenzisa izibuko ezimbini ze-serial ukusebenzisana ne-PTZ.Elinye izibuko lothotho lisebenzisa iprotocol ye-VISCA, enye isebenzisa iprotocol ye-PELCO.
4. Ulwakhiwo lwahlukile.Ukuze kuncitshiswe ubunzima benguqu ye-UAV, akukho igobolondo, kuphela i-bracket efunekayo isetyenziselwa ukulungisa ibhodi yePCB.
Uthotho lonke lubandakanya30x 2mp imodyuli yokusondeza idrone, 30x 4K imodyuli yokusondeza yedronekwayeikhamera yesivamvo ezimbini (30x imodyuli yokusondeza kunye ne-640 * 512 ikhamera ye-thermal)kunye nezinye iimveliso.
Nceda uqhagamshelane nathi ngeenkcukacha.
Ikhamera yokwandisa ixesha elide Ikhamera yeMax yeOptical Zoom 30x Zoom Camera Mdule Imodyuli yeKhamera yokwandisa iNethiwekhi imodyuli yekhamera yokusondeza Ikhamera yobushushu